Xildhibaan C/llaahi Kheyre “Horumar kasta oo ay Dowladda dhexe sameysto Puntland waxey ku noqotaa odax ku taagan”
Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Gaas ayaa caawa shaaciyey in maamulkiisu ay kalsoonidii kala noqdeen Dowladda dhexe ee Soomaaliya, kaddib markii shalay Muqdisho lagu go’aamiyey in Gobolada dhexe ee Soomaaliya ay sameystaan maamul goboleed.
C/weli oo heshiiskaasi ka dabaaqtamaya, wuxuu sheegay in Gobolka Mudug oo 2 dhinac u qeybsan aaney suurtagal aheyn in lagu darsado maamulkaasi.
Hadalka C/weli Gaas waxaa naqdiyey caawa Xildhibaan Cabdullaahi Kheyre oo ka mid ah Baarlamaanka Soomaaliya, waxaana uu ku tilmaamay hadalka C/weli Gaas inuu yahay mid qiyaali ah, isaga oo intaasi sii raaciyey in hab dhaqanka Madaxda Puntland in ay ceeb ku tahay Dowladnimada Soomaaliya.
“Puntland waxey noqotay bar ceebeed ku taal Dowladda dhexe ee Soomaaliya, sababtuna waxey tahay tillaabo kasta oo ay Dowladdu u qaado dhinaca wanaagsan & horumarka waxaad moodaa in ay odax ku tahay” Ayuu yiri Xildhibaan Kheyre, waxa uuna intaasi raaciyey in Puntland ay Dowladda ugu jiraan Xildhibaanno & Wasiiro haddii ay cabanayaana ay tahay in ay baarlamaanka ay soo maraan, haddii se ey yiraahdaan waxaan xiriirka u jarnay Dowladda.
“Haddii xaqiiqda la baal maro waxaa ka dhalanaya cadaalad darro. Puntland waxaa sameystay beel ka mid ah beelaha Soomaaliyeed, beeshaasi kama Soomaalisana, kama xuquuq badna beelaha kale, waa in lagu celceliyaa in aysan waxba ka duwaneyn beelaha dagan Sh/dhexe, Hiiraan & Galguduud” Ayuu yiri Xildhibaankaasi, waxa uuna intaasi ku daray in Maamulada dalka ka jira ay cabasho soo gudbin karaan, loona baahan yahay in cabashadaadu aaney noqon mid sed-bursi aad ku raadineyso.
“Beel waliba haddii ay tiraahdo sida aan rabno haddaan la yeelin cirkaa soo dumaya, waxey dhaawaceysaa hannaankii dowladnimo, Madaxdweynaha, R/wasaaraha & beesha caalamkuna shalay waxey si wadajir ah goob joog uga ahaayeen, una ansixiyeen hirgelinta Maamulkaas” Ayuu yiri Xildhibaan Cabdullaahi.